Na-asa ahụ na ụlọ ọrụ na-araparawo a "mkpa gburugburu" mmepe nke chere ihu nnukwu nsogbu
Gịnị ga-eme nke China na ịdị ọcha ụlọ ọrụ? N'ezie, ọ bụ nnọọ na-egbuke egbuke. N'ihi na China na mmepe obodo larịị ngwa ngwa, China si kwa n'isi n'isi ezinụlọ oriri na-eto eto n'ike n'ike. Ya mere, ọdịnihu nke China na ịdị ọcha ike ụlọ ọrụ bụ maa na-egbuke egbuke. Otú ọ dị, na nkà ihe ọmụma ígwé ojii kwesịrị ka a kewara abụọ. N'ezie, n'okpuru nnukwu AURA nke enweghi ngwụcha ìhè, na-asa ahụ na ụlọ ọrụ na-ekpuchiworị a obere ígwé ojii, ma eleghị anya, ndị a na ígwé ojii ga-aghọ ihe mgbochi dị ukwuu ga-eme n'ọdịnihu mmepe nke ụlọ ọrụ.
The ugbu a ịdị ọcha ụlọ ọrụ na-na-ada n'ime a iju gburugburu nke esiwanye obere uru. "Intensification nke mpi - price agha - mpi-aga n'ihu na ike - price agha na-ọbụna ihe ike ike." Àgwàetiti yinye nlereanya mere ka ihe na ọzọ ụlọ ọrụ na-ada n'ime quagmire nke onwe-mmịpụta. Ma ndị a bụ bụghị egwu. The egwu ihe bụ na ịdị ọcha ụlọ ọrụ bụ anya site usoro nke mbọn. Na ọnụ ọgụgụ nke onwe-kwusara ịdị ọcha ike ụlọ ọrụ, n'ezie ọnọdụ ka na ogbo nke ebube, kama na ogbo nke ịdị n'otu nke ụwa. Ihe dị iche bụ na otu onye ahịa na ike chọpụta price, na otu onye bụ ahịa na-ekpebi ndị price.
Na ajọ mpi na-aghọ nnukwu nsogbu na mmepe nke ịdị ọcha ike ụlọ ọrụ, na n'ihi obi mpi bụ irregularity na irrationality nke mmepe nke Chinese ịdị ọcha ike ụlọ ọrụ. Reporters na-ukwuu na-atụ anya ọbịbịa nke ndị oge nke ụlọ ịwụ ika shuffling, n'ihi na na mmepe nke-asa ahụ na ụlọ ọrụ, ọ bụghị na ọ dị mkpa n'ihi na ihe ndị ọzọ gwara ọgwa, ma obere na ezi. Anyị ga-aghọta na mee elu mee reshuffle oge na-abịa, ndị ọzọ mma na ọ bụ mmepe nke ụlọ ọrụ.
Dị ka a N'ihi nke a mergers ma ọ bụ mbụ, ụlọ ọrụ na-a ọnụ ọgụgụ buru ibu, ewere na ahịa na-agba mbọ enterprise, ka ukwuu ego na ukwuu uru na ahịa mpi. N'ihi ya, ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ ịdịwo a nnukwu oke nke ahịa. Ntoputa nke a ọnọdụ n'ụzọ igbochi ndị price agha n'ji ahịa, ka ụlọọrụ uru nwere ihe ụfọdụ na nkwa, nke mere na ọ na-ọzọ nwayọọ nyekwara ke technology nnyocha na mmepe na-eme n'ọdịnihu atụmatụ.
Alọghachi ịdị ọcha ike ụlọ ọrụ, a na-akpọ ụlọ ọrụ isi ụlọ ọrụ, òkè dị ka ezi ala, na oge nke ika ogbaaghara, obodo ụdị na mpaghara agba ogide protagonist, tinyere mmepe nke ụlọ ọrụ na-adịghị tozuru etozu, ụlọ ọrụ adịghị nwere ike n'ezi The usoro na ụlọ ọrụ ibu ọrụ constraints ozugbo eduga ịdị ọcha ụlọ ọrụ na-aghọ esiwanye ná nsogbu, na price usoro bụ jupụtara, ahịa price agha a na-akpọtụ, na uru na-na-ala ala. Nke a na-emekarị ga-anọgide na-akawanye njọ na-eme n'ọdịnihu. Ụfọdụ ndị ọkachamara kweere na ikpeazụ n'ihi nke price agha ga-ebibi site na ụfọdụ ụlọ ọrụ, na mgbe ahụ, a na-akpọ "ịkpọgharịa" ọnọdụ nwere ike ka na-enweta. Otú ọ dị, onye nta akụkọ na-ekwere na nke a n'uche bụ kwa-adịghị mma, n'ihi na nke a na-eme ga-eme ka dum ụlọ ọrụ na dọkpụụrụ ala, dapụtara na nnyocha na mmepe, ika development bụ ihe ọjọọ ọnọdụ.
Gịnị na-kasị mkpa na ịdị ọcha ụlọ ọrụ bụ ntoputa nke "nkuku", n'ihi na ọ bụ naanị "ụgbọelu ụgbọelu" na home ngwa nwere ike n'ezie usoro.
First, isi obodo ọrụ nke ịdị ọcha ụlọ ọrụ bụ ka nọ na ala ọgwụgwụ. Ọtụtụ puku ịdị ọcha ụlọ ọrụ gafee mba, ma e wezụga n'ihi ọtụtụ ala-ekesịpde ụlọ ọrụ, nke bụ isi obodo ahịa nke ịdị ọcha ụlọ ọrụ bụ ihe fọrọ nke nta oghere. Enweghị isi obodo ahịa, a ga-enweghị ezigbo ụlọ ọrụ nhazigharị. Ọ na-enyo na nke a abụghị a ụgha uru. Otú ọ dị, otú isi obodo ahịa nke ịdị ọcha ụlọ ọrụ ọrụ bụ a nnukwu nsogbu. Talent onye ịghọta na-asa ahụ na ụlọ ọrụ na ndị maara na isi obodo na ime bụ kwa ụkọ.
Sochiri mergers na mbụ. The ezigbo M & A omume na ịdị ọcha ụlọ ọrụ bụ obere. Ụfọdụ ndị ọchụnta ego ka nọ na mbụ, na ha kere obi ike na ọhụụ nke "ụgbọelu ụgbọelu" enterprise.
Ọzọ, enweghị talent bụ isi ihe. The enweghị talent na ịdị ọcha ụlọ ọrụ bụ a eziokwu ghọtara site na ụlọ ọrụ. "The gburugburu bụ obere, ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ dị obere, na onye ọ bụla bụ maara na ya." Ọ bụ ugbu a ọnọdụ nke talent na ịdị ọcha ụlọ ọrụ, "na-awụli elu ma na-amapụ" na "egwu ala igwu" Ọ bụ nnọọ katọrọ site na ụlọ ọrụ, ma ụlọ ọrụ nwere ihe ọ bụla mee. Ụfọdụ data bụ nnọọ akpali. Dị ka nnyocha e mere, ihe karịrị 60% nke ịdị ọcha ụlọ ọrụ na-adịghị ha onwe ha proprietary copywriting, na 82% nke ịdị ọcha ụlọ ọrụ na-amaghị ihe a na-akpọ network nkwalite.
The eru ngalaba nke ịdị ọcha ụlọ ọrụ tinye n'ihu ihe atụ-na-na-achọ azum na nduzi maka ugbu a ịdị ọcha ọnọdụ na ụlọ ọrụ mmepe, kama nanị ịkwụsị, ọ bụghị na-ahazi a elu-larịị elu ugwu, na-achịkọta a otu ego, n'ihi na n'ụzọ dị otú a , na ụlọ ọrụ layout nwere ike ịbụ ihe ezi uche. .
Post oge: Jan-18-2019
Taizhou Langle Sanitary ngwá Factory.
Consumer ina ọhụrụ smart ụlọ ịwụ bụ sou ...
Dị ka ihe ikikere portal website nnyocha e mere, gburugburu ebe obibi-echebe, ike nchekwaba na ọgụgụ isi na-elekwasị anya nke na-eji ọkụ 'anya na ịdị ọcha ike na afọ abụọ gara aga, na mgbe ...
N'ozuzu ụlọ ịwụ: nwere bụ optimi ...
Na-eto ngwa ngwa nke China na aku na uba na mmụba nke ahịa ina, mba ọzọ ịdị ọcha ike ụdị na-banyere anụ ụlọ ahịa, na ha emewo ndị ha nlegharị anya na ụlọ elu-ọgwụgwụ ahịa. Na ...
Na-asa ahụ na ụlọ ọrụ na-araparawo a ̶ ...
Gịnị ga-eme nke China na ịdị ọcha ụlọ ọrụ? N'ezie, ọ bụ nnọọ na-egbuke egbuke. N'ihi na China na mmepe obodo larịị ngwa ngwa, China si kwa n'isi n'isi ezinụlọ oriri na-eto eto n'ike n'ike. Therefo ...
Ụlọ ịwụ n'ibu imewe etịbede iwu ...
N'ozuzu, naanị otu ji achọ akara na-eji maka na mgbidi elu nke uwa, nke bụ ndokwa na a ọnọdụ nke 0,8 1 mita si n'ala, na-akpọ n'úkwù akara. Ọnọdụ nke tile n'ibu bụ nnọọ ...
© Copyright - 2019-2010: All Rights echekwabara.